Indlela yokubopha izingane ezinamaqenjini wabaqalayo: imidwebo, izithombe zesinyathelo ngesinyathelo, ividiyo
Ama-sneakers-sneakers aqoqwe, axhumene ngezandla zabo, azoba isipho esihle kakhulu somntwana. Ukuqaphela ama-sneakers anjalo akulona nzima, ngakho-ke isigaba samakhono esinezincazelo ngezinyathelo sizosiza emasenaleni asuqalayo.
Amakilasi aphezulu emikhondweni yokubopha izimpande
Into yokuqala okudingeka uyenze ngaphambi kokuba uqale ukubopha ukukhetha uhlamvu nenombolo ye-hook. Ngokuba ukubopha ukhetha izinhlamvu ezimnandi, hhayi imibala ekhanyayo kakhulu. Iphakheji ngokuvamile ibonisa usayizi we-hook, efanelekile kulezi zingxube. Sizikhethele ama-Wabasaqalayo master iziqondiso eziningana ngezinyathelo ngezinyathelo zokubamba amaphiko ezinsana, okulula ukuphinda, ugxile esithombeni. Kulezi zigaba zamakhosi ahlukene kunesici esisodwa esivamile: ngaphambi kokuba uqale ukusebenza, udinga ukuthatha izilinganiso futhi ubale inombolo edingekayo yamalokhi. Ukuze unqume ubukhulu bezicathulo zomntwana zesikhathi esizayo, dlulisa unyawo lwakhe ephepheni. Qala ukuhlanganiswa kusukela emanzini ama-booties, ngakho ubukhulu bodwa buyoba yisilinganiso esiyinhloko.
Isigaba samakhosi 1: ama-booties-sneakers of their melange thread
Esikhathini sokuqala sinyathelo esinezinyathelo sizokwazi ukuhlanganisa ama-booties ngentambo ye-melange. Ukuze wenze lokhu, udinga umbala omhlophe omnyama nolunombala obomvu, i-hook, isilinganiso sezinyawo kanye nebhokisi lezinkinobho ezinhle zokuhlobisa. Kulesi sibonelo, ubude bonyawo buyizingalo eziyisishiyagalolunye, ngakho-ke inani lezinodo libalwe ubude.
Ukuphinda u-booties-kedyh crochet wabaqalayo kusuka kule ncazelo ngesinyathelo ngezinyathelo kuzodinga:
ikhadi elinemifanekiso yamakholomu (isibonelo, okuthunyelwe okuthunyelwe, ikholomu noma ngaphandle kwekhanda);
Ifaneleka umbala nombala wokuqina.
Qala ukubopha kusukela ematheni wezinsipho. Sithatha intambo emhlophe bese sidonsa ama-loops angu-12 (bp) kanye nama-loops angu-3 ephakamisa umoya (bp). Ukuqokwa komugqa wokuqala wama-booties kuzoqala ngeqiniso lokuthi emgqeni wesine othayishiwe, faka 5 stolebikov nge-crochet (into c \_ n), phinda ngaphezulu kwezingxenye ezifanayo ezingu-10. Amakholomu angu-6 alandelayo nge-crochet esizibophe e-air loop yokugcina, kanti i-10 elandelayo kumele iboshwe ngaphesheya kochungechunge. Sigcina uchungechunge ngekholomu yokuxhuma (isb.) Ku-cp yesithathu. Siqala ukuhlanganisa irowu elilandelayo. Amaphesenti angu-3 1 tbsp. c / n esivumelwaneni esifanayo esisekelweni, bese ku-loops angu-5 kusuka emgqeni wokuqala sibopha izinti ezimbili nge-crochet. Bese kufika ikhulu lama-10. c noma ku-loops ayisithupha futhi, 2 tbsp. c \_ n, bese u-10 st.c \_ noma uqede umbuthano ngekholomu eyodwa yokuxhuma. Ukubopha okulandelayo kuya ngendlela efanayo, ngakho-ke qhubeka ubopha, ulandela iphethini kuze kube yilapho usuqedile owodwa. Into esemqoka, ungakhohlwa ukuthi udinga ukuxhuma ikholomu yokuxhuma ngaphambi kokuphinda uchungechunge olwedlule.
Ngaphandle kokuphazamisa intambo, yenza umbuthano wamakholomu nge-crochet nombuthano wamakholomu ayingxenye nge-crochet (ukuphakama kwesigamu s / n) ukuya emathangeni. Manje udinga ukubopha umbuthano owodwa wamakholomu ngaphandle kwenkokhelo enezinhlamvu ezibomvu bese ubuyela emgqeni omhlophe. Thepha imibuthano emibili yesigamu. nge \_ n.
Qala ukubopha umuthi nge-sneaker ngekhethiwe lama-loops angu-23. Umugqa wokuqala ukuhlanganisa, ukushintsha 2 tbsp. s \_ n no-1 tbsp. nge \_ n. Kuphelele, kuzomele kube namalokhi angu-15. Emgqeni wesibili, xhuma kumakholomu amabili nge-crochet ukuze uthole amalokhi angu-8. Emgqeni wokugcina we-spout sibheka wonke amaconsi we-Art. nge \_ n. Okulandelayo, sibopha umphetho ongenhla ngaphandle komugqa owodwa wekholomu ngaphandle kwekhanda, ukuze ushintsho phakathi kwemibala ye-spout nolimi lubukeke kahle.
Manje udinga ukubopha ngemuva kwe-bootie-ked ngentambo eluhlaza. Silungiselela ohlangothini olulodwa losizi futhi siphindaphinda amakholomu asigamu nge-crochet kuya kolunye uhlangothi. Yonke imigqa elandelayo ihlanganiswe isigamu. c \_ n, isikhathi ngasinye ukusika umugqa ube ngu-2 loops, ukuhlanganisa ndawonye. Uma uphinda le nqubo izikhathi ezingu-8-9, uhlangothi olungemuva luzolungele.
Sidlulisela olimini lomsiki. Kuzokwenziwa futhi ngentambo eluhlaza. Vele uxhumane nesilo solimi. s \_ n, okwenza u-3-4 imigqa ngaphezu kwezinhlangothi. Khona-ke, ngocingo olumhlophe, sibeka izinkinobho ngaphandle kwe-cape, ukuze imingcele ibonakale imnandi. Kuhlala kuphela ukudonsa i-lace kusuka emoyeni we-air and ukubamba ama-booties-sneakers ethu. Ekugcineni, ungawahlobisa ngezinkinobho ezingavamile.
Isigaba samakhosi 2: ama-booties-sneakers ngokusebenza okukhulu
Cishe wonke ama-booties-sneakers for the newborns afana nomunye nomunye, kodwa emfundweni ngayinye yesinyathelo ngesinyathelo sabaqalayo kukhona ukungezwani okuncane okudingeka kuboniswe. Ngeke sikudwebe konke ngokuningiliziwe, ngoba isimiso sokubamba sinjalo, kodwa ake sikhulume ngezikhathi ezibalulekile lapho kukhona umehluko.
Ukuze uhlangane nomntwana, uzodinga uhlamvu olumhlophe nolunombala oluhlaza, udoti olufanele kanye nomunye wedwa. Okokuqala, sizophinde sibophe izigqoko ezimhlophe futhi. Sigxila ohlelweni futhi siphindaphinda uchungechunge ngalunye.
Hlanganisa emaphethelweni ohlangothini wombala we-orange, ngokuvumelana nomgomo ofanayo nanjengasesekilasini elidlule.
Okulandelayo, yenza ulimi, kodwa udinga ukuyibopha ngokwehlukana, bese ulufaka phansi phansi kwe-bootie. Kule ncazelo, kusetshenziswe imibala e-orange neyomhlophe, ngakho-ke tie imigqa engu-11: i-orange ne-4 emhlophe. Kulesi simo, imigqa yobuso ingahlanganiswa namakholomu ngaphandle kwe-crochet, ne-purl - nge-crochet. Thepha ulimi ngocingo olumhlophe, ubeke uphawu lwe-brand ye-brand brand noma ama-initials of the baby bese ugoqa ulimi phansi.
Master class 3: booties-sneakers "ngaphansi jeans"
Ukubopha izicathulo-izicathulo ngezandla zabo kule ncazelo akulona nzima kakhulu. Ngokujwayelekile, udinga intambo, ingwegwe kanye nokuzikhandla kancane nokushisekela.
Yenza ama-air loops angu-20 ukuqala ukubopha izinyawo. Bese uphinda uchungechunge ngokwesiko, ungakhohlwa ukuqeda uchungechunge ngeposi elixhumekayo.
Ngesikhathi umhlabathi we-bootie - i-sneaker isiphelile, udinga ukubopha izinhlangothi. Sula umugqa wamakholomu nge-crochet ngaphandle kokwanda, futhi emgqeni olandelayo shayela u-1 ukuphakama kwe-loop emoyeni, uphinde ubophe umugqa. c \_ n bese uqedela. Hlanganisa umugqa owodwa wamakholomu ngaphandle kwe-crochet ngaphakathi ngaphakathi ngentambo ebomvu. Okulandelayo esithombeni - incazelo ichaza iziketi ze-blue blue. Yenza uhla lwamabhodlela ngamakholomu nge-crochet, phinda izikhathi eziningana, wenze inombolo eminingi. b \_ n. Ukuze uhlanganise zonke izinombolo ezingavamile, yenza ubuciko. s \_ n, ukweqa ama-loops angu-2-3 ngokulandelana. Phinda le nqubo ngomugqa ngamunye. Zonke izinombolo ngisho zihlanganisa ubuciko. b \_ n. Ukuze uthole ukuphakama okudingekayo kwezinhlangothi, udinga ukuphinda ngemigqa engu-19-20.
Hlanganisa ngokuphambene ithiphu le-boot nolimi lwesihlangu.
Ukuze uhlobise izicathulo ezinganeni, ungahlanganisa uphawu noma imbali.
Kuhlala nje ukuqoqa amasinki ethu, okungukuthi, ukusika umsizi, ukubopha uchungechunge noma ukhethe ibhande le-satin, ubophe ama-sneakers bese ugoba umhlobiso.
Ividiyo yabaqalayo: indlela yokubopha ama-booties-sneakers crochet
Kuyinto elula ukuphindaphinda ukubopha amaphiko ezithombeni, kodwa uma kukhona i-class class, khona-ke inqubo izohamba ngokusheshisa, futhi kuyoba nezinkambiso ezimbalwa noma ezingenakuqondakala noma ezinzima. Sikunikeza izincazelo ezicacile zevidiyo, ngokugxila kulokho ongakwenza khona kalula ukwenza ama-booties for the newborn. Izinto ezenziwa ngezandla zabo ngothando zilokhu zithandwa kakhulu, ngakho-ke uma ufuna ukuletha isipho esingakhohlwa umfowenu, udadewabo, umshana wakhe noma umshana, bese wenza izinkinobho ezithakazelisayo - amasinki. Futhi izithombe namavidiyo anamakilasi amancane kuzokwenza lula umsebenzi wakho, ngisho noma ungakaze usebenze.
I-Openwork shawl crochet
I-summer blouse crochet
Imisindo engakahambi endleleni: sihlanganisa ama-booties ezinsana ezitholwa
Indlela yokuxhuma izinhlobo eziyinhloko ze-crochet yekholomu
Ukukhathazeka: izimpawu, ukwelashwa, ukuvimbela
I-dysplasia yama-congenital ye-joint hip
Ukudla okunempilo nokuphila okunempilo
Indlela yokuziphatha emsebenzini omusha
U-Prokhor Chaliapin wasinda ebantwini bakhe eMaldives, isithombe
Ukusetshenziswa kwamafutha e-currant ku-cosmetology nemithi
Isobho sezinkukhu nge-noodle 2
Isobho seSpanishi elibandayo uSalmorejo
Inyosi shish kebab ngeviniga
Isitshalo seqanda esikhishwe ngesitayela sase-Armenia
I-Milk Cocktail nge-raspberry
Izandla ngoMashi 8 ngezandla zabo enkulisa nasesikolweni